Ku saabsan fayraska koroona | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Bulsho / Wararka / Ku saabsan fayraska koroona
Faayraska koroona wuu ku faafay Iswiidhan iyo aduunka oo sababay cudurka covid-19. Waa dadka oo dhan mas’uuliyadooda in la joojiyo faafinta fayraskan. Ka durug dadka kale marka aad joogtid meel gudo ah iyo banaanka labadaba. Is tallaal si aad u caawiso in la joojiyo faafida cudur kala qaadista. In la is tallaalo waa bilaash.
Boggagan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan faayraska koroona, covid-19 iyo tallaalyada. Halkan waxaad ka helaysaa xitaa su'aalo iyo jawaabo la ururiyay kuna saabsan sida faayraska koroona raad ugu yeelan karo caafimaadkaaga iyo xaaladaada nolosha. Boggagan waxaad xitaa ka helaysaa filimo ku saabsan sida baaritaanada iyo tallaalku u dhaco iyo xiriiryada hey'addaha dawladeed iyo ururrada kala duwan oo leh macluumaad dheeraad ah.
Nin gacmaha ku dhaqaya sixni weyn oo cadaan ah.
Haweenay dhinac fadhida kombiyuutar oo gacmaha ku haysa qaybta wax lagu qoro. Dhinaceeda waxaa miiska ka muuqda qalabka dhagaha la gashado, moobil telafoon, hagaha kombiyuutarka iyo dhowr warqadood oo kala go’an.
Afar gees leh 6 sawir oo ah xiriiriyayaasha bulshada oo ka warbixinaya covid-19. Korka sarena waxaa ka muuqda wareeg leh saddex gees kaas oo astaan u ah badhanka ciyaarta ee fiidyow.
Qaybo tallaal oo ku jira dhalooyin yar oo dhowr saf ah.
Ku socota adigaaga iska tallaalaya covid-19.
Lambarada telafoonka ee muhiimka ah
Khadka telafoonka qaran kuna saabsan faayraska cusub ee koroona kuna qoran dhowr luqadood: 08-123 680 00
Wac 113 13 dhanka su'aalaha guud ee ku saabsan covid-19.
Haddii aanad isku dabari karin inaad keligaa isku daryeesho guriga waa inaad wacdaa telafoon lambarka 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka.
Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar ku ah wac 112.
Warbixinaha dheeraadka ah ee ku saabsan faayraska karoona iyo covid-19:
Hey’adda arrimaha caafimaadka ayaa leh mas’uuliyada qaranka ee arrimaha caafimaadka dadweynaha Iswiidhan. Akhri dheeraad ku saabsan faayraska karoona oo luqado kala duwan ah kuna qoran bogga intarnatka ee Hey’adda arrimaha caafimaadka.
Radio Sweden, soomaali ah
Dhagayso wararka ku saabsan faayraska karoona oo ku baxaya luqada kala duwan dhanka Idaacada Iswiidhan.
Krisinformation.se waa bog intarnat lehna macluumaadka ka soo baxay hey’addaha dawladeed marka dhibaato ama dhacdo khatar ahi ka dhacdo bulshada. Halkan waxaa ku jira wararka cusub ee ku saabsan faayraska karoona.
Dhinaca bogga Hagida daryeelka caafimaadka ee 1177 waxaa ku jira macluumaadka xiriirka iyo wakhtiyada furitaanka ee rugaha caafimaadka ee dalka oo dhan. Halkaasi waxaad xitaa ka helaysaa macluumaad ku saabsan noocyada kale ee rugaha caafimaadka iyo daryeelka takhasuska ah.
Hey’adda dawladeed ee taageerida ururada diiniga ah (MST)
Iyadoo ay sabab u tahay xaalada iminka jirta waxaa Hey’adda dawladeed ee taageerida ururada diiniga ah (MST) iyo Hey’adda badbaadinta bulshada iyo heeganka (MSB) ka codsadeen wakiilada ururada diiniga ah ee kala duwan inay dadka wargeliyaan wixi ku saabsan Corona/COVID-19. Akhri wixi dheeraad ah oo daawo filimada kala duwan. Wakiiladan waxay ku hadlayaan luqadahan soo socda: Iswiidhish, Carabi, Siiriyaanska/Suryoyo, Tigrinjya, Seerbiga, Turki, Taylandiis iyo Faarsi.